Iyo 9-Nhanho Nongedzo yekugadzira Yakagadziriswa Blog Yekutsvaga | Martech Zone
Iyo 9-Nhanho Nhungamiro yekugadzira Yakagadziriswa Blog yekutsvaga
Mugovera, December 13, 2014 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Kunyangwe isu takanyora Corporate Blogging Kune Dummies makore angangoita mashanu apfuura, zvishoma zvishoma zvachinja muhurongwa hwese hwekushambadzira zvemukati kuburikidza neyako blog blog.
Zvinoenderana nekutsvaga, kana iwe uchinge wanyora anopfuura makumi maviri nemaviri mablog mablog, blog traffic traffic inowedzera kusvika kusvika ku24%!
Iyi infographic kubva Gadzira iyo Bridge inofamba nedzimwe nzira dzakanakisa dzekugadzirisa yako blog yekutsvaga. Ini handitengeswe kuti ndiyo yekupedzisira giraidhi ... asi yakanaka chaizvo.
Nheyo dzavanosuwa pakutanga ndedze kuona kuti uri kunyora pane zvemukati manejimendi sisitimu yakagadziridzwa pakutsvaga injini. Kunyora zvemukati papuratifomu yepasi-soro kutambisa nguva uye kunozonetsa zvisinei nekuti unonyora zvakadii.
Zano ravo rekutanga mune infographic ndeye nyora zvemukati zvemukati uye nyora zvakanaka. Izvo zvoga hazviite kuti iwe uwane pane yekutsvaga injini mhedzisiro, hazvo. Iwe unofanirwa kuvaka chiremera pamusoro penguva uye zvemukati zvako zvinofanirwa kunge zviri nani pane zvakanaka - zvinofanirwa kuve zvinoshamisa. Inoshamisa zvemukati zvinogovaniswa - uye zvakagovaniswa zvemukati zvinowaniswa! Pane zvakawanda zvakanaka zvemukati kunze uko zvakanyorwa mushe izvo zvisingawanikwe mune yekutsvaga mhedzisiro!
Iyo infographic inoti zvakare iwe unofanirwa kuve uine zvirinani Zviuru zviviri zvemashoko pamashoko. Ini handibvumirane nemoyo wese, iyi nhamba hausi mutemo uye iwo muenzaniso wakanaka wekuenderana pamusoro pechinokonzera. Huwandu hwemashoko mune yako posvo haumbofi wakakuisa pachinzvimbo. Ruzhinji rwezvatinotumira ruri pasi pemashoko zviuru zviviri uye isu tinowirirana pamakwikwi zvakanyanya.
Ini ndinotenda kuti vanhu vanoisa yakawanda yekutsvagisa uye kuronga mune yakazara posvo iri anoshamisa ungave uine mukana uri nani wekuve izvo zvemukati zvakagovaniswa uye zvinoratidzwa Kureba hakusi mutyairi wekumisikidza ipapo, iwo mhando yezviri mukati. Ini ndinosarudza mapfupi maposita kazhinji kazhinji kwete - haudi kutsvukisa paunogona kunyora zvakapfava.
Zano rasara rakasimba - dhizaini, kumhanya, kupindura, mashandisirwo enhau, ma tag ezvinyorwa, kunyoreswa kweemail, kusimudzira munharaunda ... mazano ese akasimba. Kana zviri zvekuperetera uye kukanganisa kwe grammatical - tenda kunaka vaverengi vangu vandiregerere ipapo. Uye kana iye munyori weiyo infographic akatarisisa, ivo vaizowana zvisirizvo mune imwe yemisoro yavo!
Pakupedzisira, kubudirira kwe blog yako kunoenderana nechinhu chimwe chete: Kunyangwe iwe uri kupa kukosha kune vateereri vako kana kwete. Kana iwe uri, iwe uchaona yako blog ichikura uye ichitumbuka kuita yakakura inbound yekushambadzira sosi yekambani yako - kunyanya kuburikidza neinjini dzekutsvaga. Kana usiri kupa kukosha, iwe uchatadza. Iyo isiriyo kana nzira kwayo yekunyora blog iri kune vateereri vako, kwete iyi infographic!
Tags: blog grammatical kukanganisablog mispellingsKugadziridza blogblogging bhizinesibhizinesi bloggingchantelle flanneryContent Marketingyemubatanidzwa blogkubatanidzwa bloggingkubatanidzwa kubhurogira madummiesgadzira zambukodouglas karrinfographicSearch Engine Optimizationkusimudzira vezvenhaumazwi blog post
Kushandisa Kutengesa Kuisa Muviri Kaviri Kutendeuka Kwako Kunobuda
Dec 14, 2014 pa 1: 17 AM
Great post ndinoda iyi post.
Dec 30, 2014 pa 10: 06 AM
Great post ine mifananidzo yakanaka. handizive kuti wakaawana kupi, asi anokwana zvakakwana! Basa rakanaka